घुस अफर गर्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्दै उपत्यकाका प्रहरी – KhabarTime
घुस अफर गर्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्दै उपत्यकाका प्रहरी
४ महिनामा प्रहरीलाई घुस दिने ३० जना पक्राउ
माघ २६, काठमाडौं । शुक्रबार एकाबिहानै बागबजारमा रोचक घटना भयो । मापसे गरेका एक व्यक्तिले पार्किङ गरी राखेको मोटरसाइकललाई लात्ती हानेर ढलाइदिए । उनको दुर्भाग्य, कमलपोखरी वृत्तका प्रहरी त्यहाँ नजिकै थिए र उनको उपद्रो देखिहाले ।
प्रहरीले दिलिप बस्नेत नामका ती व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनले १ हजारको नोट देखाए । प्रहरीले उक्त घुस स्वीकार गर्नुको साटो ती व्यक्तिलाई पक्राउ गर्‍यो र पैसा पनि जफत गर्‍यो ।
यो एउटा दृष्टान्त घटना मात्र हो । केही दिनयता प्रहरीलाई घुस दिने क्रममा पक्राउ पर्ने क्रम निकै बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय समाचार कक्षले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मात्रै यस्ता ३ वटा घटना समेटिएका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार सुकेधारामा बा ५ ख ४४०१ नम्बरको टिपर जाँच गर्ने क्रममा चालक मिलबहादुर तामाङले प्रहरीलाई १ सय रुपैयाँ घुस दिन खोजे । तर, सुकेधारा प्रभागबाट खटिएको प्रहरीले रुट परमिट नभएका ती चालकलाई नै नियन्त्रणमा लियो ।
बसुन्धारामा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई ५ सय रुपैयाँ घुस दिन खोज्दा आशिष थापा र विकाश थापा समातिए । उनीहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेर ग ८ प १०५९ नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका थिए र चेकजाँचका क्रममा प्रहरीलाई घुस दिन खाजेका थिए । यी दुई घटना बिहीबार रातिका हुन् ।
गत २ पुसमा काठमाडौंको सोह्रखुट्टे चोकमा रौतहटका सहजाद मिकरानी मापसे गरेर मोटरसाइकल चलाएको अरोपमा समातिए । डियूटीमा रहेका प्रहरी हवल्दार राजनकुमार थापाले ज १० प ६५२६ नम्बरको मोटरसाइकलसहित उनलाई समातेका थिए । थापाले चिट काट्नै गर्दा मिरानीले एक हजार रुपैयाँको अफर गरे । तर, हवल्दार थापा उनको प्रलोभनमा परेनन्, उल्टै पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेमा बुझाइदिए ।
१९ कात्तिकमा सोल्टिमोडमा फूलको गाडी आइरहेको थियो । त्यहाँ खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक राकेश राजवंशीले चेकजाँच गर्ने क्रममा कागजपत्र मागे । तर, चालक कालिमाटीका २३ वर्षीय सुदीप शाहले दुई हजार रुपैयाँ घुस दिन खाजे । तर, राजवंशीले त्यो पैसा लिएनन् । पक्राउ गरेर प्रहरी वृत्त, कालिमाटीमा बुझाइदिए ।
यसरी प्रहरीले अहिले घुस अफर गर्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । केही सर्वसाधारणले भने प्रहरीको व्यवहारमाथि आशंका पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको टिप्पणी हुन्छ, ‘थोरै पैसा भएर समाते, धेरै भए के छोड्थे ।’
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको तथ्याङ्कले करिब ४ महिनाको अवधिमा ३० जनाले घुस फिर्ता गरेको देखाउँछ । त्यसो भए के साँच्चै उपत्यकाका प्रहरी फेरिँदै गएका हुन् त ?
उपत्यकाभरिका प्रहरी कार्यालयहरुको नियमन गर्ने रानीपोखरीमा रहेको मेट्रो प्रहरीका प्रमुख डिआईजी शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘प्रवृत्ति विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ ।’
आखिर कसरी यो सम्भव भयो त ?
२० असोजमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका डीएसपी श्यामकुमार राई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात समातिए । त्यसपछि ३१ भदौमा कोटेश्वर र काँडाघारी प्रहरी प्रभागका ९ जना प्रहरी अधिकृत बालुवा तस्करसँग घुस लिएको आरोपमा समातिए । त्यहाँका अधिकारी पक्राउको श्रृङ्खला त्यतिमा मात्र रोकिएन । अर्को दिन पुनः केही अधिकारी अख्तियारको फन्दामा परे ।
घटनापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि चासो दिए । उनले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त लामा, ललितपुर प्रहरीका रविन्द्र धानुक र भक्तपुर प्रहरीका हिमालय श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमै बोलाएर स्पष्टिकरण सोधे ।
लगत्तै, केही विवादित प्रहरी इञ्जार्जहरु फेरबदल गरिए । १ साउनमा एसएसपीबाट डीआईजीमा भएको बढुवापछि मेट्रोको नेतृत्वमा शैलेश थापा क्षेत्री आए । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अख्तियार गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अभियान नै सञ्चालन गरे ।
‘हामीले अनुमगन र सुपरिवेक्षणको कार्यलाई सक्रिय बनाएका हौं’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस क्रममा गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा पनि ल्याइएको छ भने घुस दिनेलाई समात्नेसहित अन्य उत्कृष्ट काम गर्नेलाई रेकर्डमा जाने गरी पुरस्कृत पनि गर्न थालिएको छ ।’
उनी यो कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताउँछन् । उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उत्कृष्ट काम गर्ने अधिकारीको प्रहरी सञ्चार सेटमै समेत प्रशंसा हुने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरुलाई कदर पत्र लिएर पुरस्कृत पनि गर्ने गरिएको छ ।
‘यो अभियानलाई दिगो बनाउने कोशिश गरिरहेका छौं’, थापा भन्छन्, ‘यसको निरन्तरतामा शंका गर्नु पर्दैन ।’
४ महिनामा ३० जना पक्राउ
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयकी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पूजा सिंहका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा ३० जना प्रहरी अधिकारीले घुस दिन खोज्नेलाई रकमसहित पक्राउ गरेका छन् ।
उनीहरुले कार्यक्षेत्रमा घुस दिने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको हिरासतमा पुर्‍याएका हुन् । सिंह भन्छिन्, ‘यो अवधिमा एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक, ९ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, ६ जना प्रहरी हवल्दार, १० जना प्रहरी जवान लगायत गरी ३० जनाले नगद दिने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् ।’
उनका अनुसार यो अवधिमा उत्कृष्ट काम गर्ने ७६ जनालाई पुरस्कृत गरिएको छ । पुरस्कृत हुनेहरुमा प्रहरी नायब उपरीक्षक एक जना, प्रहरी निरीक्षक ४ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक ७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक १४ जना, प्रहरी हवल्दार १७ जना र प्रहरी जवान ३३ जना छन् ।
यही अवधिमा १ सय १५ जना प्रहरीमाथि कारबाही पनि भएको छ । त्यसरी कारबाहीमा पर्नेमा १ सय १५ जना छन् । एसएसपी सिंहका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा ५ जना प्रहरी नायब निरीक्षक, ६ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, २४ जना प्रहरी हवल्दार र ५० जना प्रहरी जवान छन् ।
कारबाहीमा पर्नेमध्ये ५१ जनालाई नसियत, २५ जनलाई निलम्बन, ४ जनाको पदोन्नति रोक्का, १२ जनाको तलब वृद्धि घटुवा, ५ जनाको तलब वृद्धि रोक्का, एक जनालाई बर्खास्त, ९ जनालाई सेवाबाट हटाइएको र ८ जनालाई सुरुको स्केलमा घटुवा गरिएको छ ।
मन्त्री पण्डित युएईतिर लागे, संसदमा बोल्ने जिम्मा रविन्द्रलाई
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुका लागि आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी